Ku naso wadamada kulul
Xaggee ku nasan kartaa Koonfur-bari Aasiya
Xagee loo aadaa BADDA
Maqaallo waxtar leh
Immisa ayay ku kacaysaa furriinka Filibiin?
Category: Xagee loo aadaa BADDA 0
Nidaamku wuxuu qaadan karaa meel kasta laga bilaabo 1 ilaa 10 sano si uu dabayluhu u socdo nidaamka maxkamadaha Filibiin ee tartiib tartiib ah iyo culeyska xad dhaafka ah, oo qiimihiisu yahay ugu yaraan $4,800 (qiyaastii P250,000). Tan iyo markii…
Su'aashaada: Filibiin ma tahay xuduud saxan oo isku xidhan?
Soohdintan saxan isku-dhafan ee aadka u firfircoon waxay ku fidsan tahay labada dhinac ee jasiiradaha Filibiin, laga bilaabo Luzon ee waqooyiga ilaa Jasiiradaha Celebes ee koonfurta. … Hoos u dhigista…
Waa maxay Dama ee Filibiin?
Dama waa ciyaar qabayaal boodbood ah oo lagu ciyaaro Filibiin. Dhexdeeda, gabal boqor ayaa laga yaabaa inuu qabsado boodboodka u duulaya hal jiho. 5×5 oo ka kooban…
Jawaabta ugu fiican: Singapore badbaado ma u tahay dumarka solo raaca ah?
Haa Haddii aad ka fekereyso safar Singapore keligiis ah, ma dooran kartid waddan ammaan ah oo aad u safarto. … Nadiifi, aad u ammaan badan iyo magaalo cajiib ah oo lagu…
Su'aal: Immisa nooc oo dhir ah ayaa ku nool Malaysia?
Waxaa jira qiyaastii 8,500 nooc oo dhirta xididdada dhiigga ah oo ku yaal Peninsular Malaysia, iyadoo 15,000 kalena ay ku sugan yihiin Bariga. Kaymaha Bariga Malaysia ayaa lagu qiyaasaa inay yihiin…
Waa maxay bisha ugu wanaagsan in la booqdo Halong Bay?
Oktoobar ilaa Disembar (December) waa waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Halong Bay iyo xilliga ugu sarreysa iyadoo ay ugu wacan tahay cimilada wanaagsan iyo fursadda roobka oo yar, in kastoo aad awoodid…
Waa maxay noocyada cimilada Filibiin?
Filibiin waxay leedahay shan nooc oo cimilo ah: kaymo roobaadka kulaylaha, monsoon kulaylaha, savanna kulaylaha, kulaylaha hoose ee qoyan iyo badweynta (labadaba waxay ku yaalaan meelaha sare) oo lagu garto heerkul aad u sarreeya, cadaadis badan…
MCDO Filibiin ma xalaal baa?
Dhammaan McDonalds ma xalaal baa? Ganacsiga cuntada degdega ah oo ay ku jiraan. McDonalds, KFC, Hungry Jacks, Red Rooster, Subway, Domino's dhamaantood waxay isticmaalaan digaag iyo farmaajo xalaal ah, in kasta oo inta badan…
Halkee ayaan seexan karaa Hoi An?
Miyay fiicantahay inaad joogtid Hoi An ama Da Nang? Marka booqdayaashu ay doortaan Hoi An qurux badan Da Nang, waxay yiraahdaan sababtoo ah waxay helayaan…
Ma u geli karaa cusboonaysiinta baasaboorka Filibiin?
DFA miyay ogolaataa codsadayaasha soo gelitaanka? KALIYA KALIYA KALE IYO kiisas degdeg ah ayaa loo ogol yahay socodka ku salaysan Courtesy Lane ee DFA Aseana iyo Xafiisyada kale ee Qunsuliyada ee…
haye! Dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan is dejino. Waxaan hubaa inaad aad u jeceshahay. Daacadnimo, aniguna waan sameeyaa! Inta badan waxaan jeclahay inaan u safro meel fog iyo waqti dheer. Tani waa dareenkeyga! Koonfur-bari Aasiya waxaa jira doorashooyin badan oo aad aadi karto safar. Waxaan kula talinayaa Thailand inay noqoto mid caalami ah iyo dhinacyo badan oo ah meesha ugu fiican ee Koonfur-bari Aasiya.
WeChat ma ku bixin karaa isticmaalka Malaysia ee Shiinaha?
Jawaabta ugu fiican: Sideed ixtiraam ugu muujisaa Vietnam?
Waa maxay luqadaha waaweyn ee lagaga hadlo Vietnam?
Waa maxay diinta ugu weyn Filibiin?
Halkee Filibiintu wax ku baran karaan Ingiriisiga dibadda?
Immisa arday ayaa ku sugan UP Manila?
Waa maxay sababta saadka bariiska ee Filibiin uga yaraa?
© 2022 Ku naso wadamada kulul
U fiirsashada kuwa xaqa u leh! Dhammaan agabka waxaa lagu dhejiyay goobta si adag ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho ah! Haddii aad aaminsan tahay in dhajinta shay kasta ay ku xad-gudbaynayso xuquuqdaada daabacaada, hubi inaad nagala soo xidhiidho foomka xidhiidhka oo alaabtaada waa laga saari doonaa!